Ady tany eo amin’ny Malagasy sy mpanjanatany fahiny Mbola mampifanjevo ny ao Moramanga
Saika tanin’ny faritany ny ankamaroan’ny tany ao Moramanga, hoy ny depiote teo aloha voafidy tao an-toerana, Charles Andriamahefa.
Tamin’ny fanjanahantany dia nisy tanina mpanjanaka niverina amin’ny fanjakana ny ankamaroany ny taona 1999. Ny faritany no nitantana ny ankamaroany. Taty aoriana dia mbola misy hoe “colon” manana tany hampiambenany olon-kafa. Mifanjevo ireo tany ireo ankehitriny. Taorian’ny fitsapan-kevi-bahoaka tamin’ny 2006 moa dia foana ny faritany. Tsy afaka manome taratasy intsony. Nisy sarintsarina “comité ad’hoc” taty aoriana natsangan-dry zareo saingy tsy tokony hankatoavina io satria mbola izay voasonian’ny faritany ihany no eken’ireo rafitra misahana ny fananantany (“domaine” sy “topo”). Niteraka olana io taty aoriana satria misy mahazo tany vao haingana kanefa ireo efa nanana “titre” elabe tsy nahazo. Miteraka savorovoro hatrany amin’ny ambaratonga ambony io ary misy vaditany mamoaka ny olona ao an-trano mihitsy nefa tsy ara-dalàna, hoy hatrany ny fanazavany. Tranga hafa koa ny fisiana vazaha manana tany tamin’ny andron’ny fanjanahantany izay misy mpiambina. Misy kisandosandoka koa kanefa dia ohatry ny manan-kery ary mandresy any amin’ny tribonaly. Ankehitriny moa, hoy hatrany izy, dia misy rafitra manokana napetraka hiarovana ireny vahoaka hiharan’ny tsindry hazo lena ireny ary dia miandry izay fiasany ity solombavambahoaka teo aloha ity.